ILufthansa yongeza iindiza zehlobo zaseSpain, ePortugal naseGrisi
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » ILufthansa yongeza iindiza zehlobo zaseSpain, ePortugal naseGrisi
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseJamani zokuPhula • Iindaba zaseGrisi zokuPhula • iindaba • IPortugal Breaking News • Ukwakha kwakhona • Xanduva • ISpain Iindaba Eziphambili • Tourism • Intetho yezoKhenketho • uthutho • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Ngeendawo ezingaphezu kwe-100 zeholide, iLufthansa ne-Eurowings zibonelela ngeendawo ezininzi zokuya eholideyini kunakuqala.
ILufthansa yonyusa iminikelo yayo yokubaleka ukuya kwiindawo zeholide eSpain, ePortugal naseGrisi
Iinqwelomoya ezongezelelekileyo zaseLufthansa ziya kuthatha indawo yokuphupha njengeCrete, iAlgarve kunye neBalearic Islands
ILufthansa yongeza ezinye iinqwelomoya ePalma de Mallorca, eValencia, eIbiza, eFaro, eLisbon naseHeraklion
Kanye ngexesha leveki ende ngaphezulu kweCorpus Christi, iLufthansa ngoku ibonelela ngeenqwelomoya ngakumbi kwiindawo ezinomtsalane zelanga.
Ukusukela nge-3 ukuya ku-6 kaJuni, inqwelomoya yonyusa iminikelo yokubhabha kwayo ukuya kwiindawo zeholide eSpain, ePortugal naseGrisi.
Lwasekhaya Lufthansa Iinqwelomoya ziya kusuka eMunich naseFrankfurt ziye kwiindawo zokuphupha ezinjengeKrete, iAlgarve kunye neBalearic Islands. ILufthansa yongeza iindiza ezininzi ngesaziso esifutshane ePalma de Mallorca, eValencia, eIbiza, eFaro, eLisbon naseHeraklion, umzekelo. Ngokupheleleyo, ukuqala kukaJuni, abakhweli bangakhetha kwiinqwelomoya ezongezelelweyo ezingama-20.
Iinqwelomoya ziyafumaneka ngokubhukisha ngoku, zidityaniswe kunye nokukhetha kwakhona kunye nokutshintsha kokubuyela kwimeko yesiqhelo.
Ngeendawo ezingaphezu kwe-100 zeholide, iLufthansa kunye ne-Eurowings zibonelela ngeendawo ezininzi zokuya eholideyini kunakuqala. Umzekelo, iLufthansa ihamba ngenqwelomoya ukusuka eJamani ukuya kwiindawo ezilishumi elinambini zamaphupha eGrisi okokuqala. Abakhweli banokukhetha kwiindawo ezinomtsalane zohambo olude kwiindawo eziphezulu zeholide ezinjengeMadoda (Maldives), iCancún (Mexico) okanye iPunta Kana (eDominican Republic).
ILufthansa ihlala iququzelela ukuhamba phantsi kwemigaqo ephezulu yezokhuseleko nococeko, ithathela ingqalelo imeko yesifo ngokubanzi.
Abathengi kufuneka baqwalasele ungeniso olufanelekileyo lwangoku kunye nemigaqo yokuvalelwa ngabodwa xa beceba uhambo lwabo.
Lufthansa Spain flights